अन्तत : मेसीको कलब छाड्ने निर्णय ! «
अन्तत : मेसीको कलब छाड्ने निर्णय !
Published : 26 August, 2020 7:14 am
अन्तत: लिओनल मेसीले आफ्नो भविष्यबारे मुख खोलेका छन् । झण्डै दुई दशक स्पानिस जायन्ट बार्सिलोनामा बिताएका मेसीले आफूले क्लब छाड्न चाहेको बताएका छन् । कप्तानसमेत रहेका मेसीले मंगलबार क्लबका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्तामेउ समक्ष आफूले क्लब छाड्न चाहेको जानकारी गराएका हुन् । उनले यसबारे आफ्नो धारणा क्लबलाई फ्याक्समार्फत पठाएको स्पानिस अनलाइन मार्काले जनाएको छ । मेसीले आफ्नो सम्झौताबाट रिलिज गरिदिन आग्रह गरेका छन् । मेसीको रिलिज क्लब ७०० मिलियन युरो रहेको छ ।
मेसी बार्सिलोनामै रहने : क्लब छाड्ने निर्णयको बदलामा बार्तामेउ अध्यक्ष पद छाड्न तयार !
स्पानिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्तामेउले कप्तान लिओनल मेसीले क्लब छाड्ने निर्णय बदलेमा आफूले
मेस्सीले छोड्दै छन् बार्सिनोला कुन क्लब ले लैजाला त ?
मंगलबार राति एउटा सनसनी समाचारले फुटबल जगतलाई हल्लाइदियो । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान तथा सुपरस्टार
रोनाल्डो भन्छन् नेमार भन्दा एम्बाप्पे ठीक
रियल मड्रिडले लामो समयको लागि ठूलो लगानी गर्ने हो भने पेरिस सेन्ट जर्मेनका फ्रान्सेली खेलाडी